Shiinaha W nooca (saddex waji) warshad wax soosaarka kululaynta carbide silicon iyo soosaarayaasha | SICTECH
In habka wax soo saarka ee galaas sabayn, tan iyo element kuleyliyaha carbide kuleyliyaha waa in deegaanka qubayska daasad daran muddo dheer, waxaa jira shuruudo adag oo gaar ah oo loogu talagalay usha carbon carbon ee qubeyska daasadda.
In habka wax soo saarka ee galaas sabayn, tan iyo element kuleyliyaha carbide kuleyliyaha waa in deegaanka qubayska daasad daran muddo dheer, waxaa jira shuruudo adag oo gaar ah oo loogu talagalay usha carbon carbon ee qubeyska daasadda. Guud ahaan, qalabka kuleyliyaha carbide-ka silikoonku uma adkeysan karo wasakhda heerkulka sare iyo gaaska wax dila. Marka, curiyaha kuleylka ee silsiladda silsiladda ah ee qubayska qasacaddu waa inuu lahaadaa cufnaan-kululeyn cufnaan leh oo leh adeeg aad u dheer.
SICTECH silicon carbide element kuleyliyaha waxay siin kartaa macaamiisha waxyaabo kala duwan oo heer sare ah oo kululaynta, oo ay ku jiraan MHD aaladaha kululaynta cufnaanta sare, HD Cufnaanta sare ee kululeeyaha adag, iyo HD Cufnaanta sare ee kululeynta godadka leh.
Waxyaabaha W-Qaab-dhismeedka Silicon Carbide Kuleylka Cunnada Ikhtiyaari ah
1, MHD walxaha kuleylka
Cufnaanta> 2.8g / cm3
Heerkulka dusha sare 1625 ℃
2, HD walxaha kuleylka adag
Cufnaanta> 2.58g / cm3
Heerkulka dusha sare 1500 ℃
3, HD walxaha kuleylka kuleylka ah
Hore: Nooca LD (hal muquun ah) walxaha kuleyliyaha carbide
Xiga: Nooca 'GC element silicon carbide element
3 Qaybta kululeeyaha Qaybta
3 Cunsurka Kuleylka Wejiga
Silicon Carbide Cunsurka Cunsurka
W Qaabab Silicon Carbide Kuleylka